कस्तो अचम्म ! एउटा खुट्टै छैन तर यस्तो राम्रो नाच्छिन् यी गोर्खालि चेलि (हेर्नुस् भिडियो ) - Public 24Khabar
Home Lifestyle कस्तो अचम्म ! एउटा खुट्टै छैन तर यस्तो राम्रो नाच्छिन् यी गोर्खालि...
टिकटक हेर्नको लागि कतिपय सानासाना नानीहरूलाई पनिबेक किसिमको लत नै बसिसकेको हुन्छ। उनीहरू हेरिरहन तथा गीतहरूमा अभिनय गर्नमा इच्छुक समेत हुने गर्दछन्।त्यसैगरी किशोर कोशोरीहरू पनि शाहसिक टिकटक बनाउने क्रममा विभिन्न ठाउँबाट लडेर मृ’त्युु भएका
घटनाहरूसमेत हामीले सुनिरहेका छौँ।त्यसैगरी यसको दुरुपयोग हुने गरेकाले कतिपय विद्यार्थीहरू यसको नशा बाट बाहिर निस्कन नसक्दा उनीहरूको अध्ययनमा समेत असर परिरहेको छ।
Previous articleबेहुलिसगै बेहुला पनि यसरि धरधरि रो ए ,बेहुलालाई फकाउनै मुस्किल (हेर्नुस् भिडियो )
Next articleकठै ! यो कस्तो रो’ग लाग्यो ,मलाई ब*चाउनुहोस् म बा*च्न चाहान्छु ( हेर्नुस् भिडियो ) सहयोग का लागि सेयर गराै